Waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macOS Big Sur iyo Monterey | waxaan ka imid mac
Waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macOS Big Sur iyo Monterey
Waxaan had iyo jeer ognahay in cusboonaysiinta nidaamyada hawlgalka ee ugu dambeeyay ay ka badan tahay tijaabinta sifooyinka cusub ee horumariyeyaasha Apple ay fuliyeen. Hagaajinta iyo hagaajinta khaladaadka ayaa had iyo jeer lagu daraa, kuwaas oo mararka qaarkood u muuqda inay yihiin waraaqo kaliya, laakiin waxaan si fiican u ognahay in tani aysan ahayn xaaladdu. Dhab ahaantii, cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macOS Big Sur iyo macOS Monterey waxaa ku jiray horumarin taxane ah iyo waxay ka fogaadeen soo-gaadhista nuglaanta cusub ee macOS.
Microsoft ayaa soo warisay in nuglaanta cusub ee macOS ay u oggolaan karto weeraryahan inuu hareer maro tignoolajiyada daahfurnaanta, oggolaanshaha iyo xakamaynta (TCC) ee nidaamka hawlgalka". Apple waxay hagaajisay dayacanka bishii hore iyada oo qayb ka ah macOS Big Sur iyo macOS Monterey. Marka, si la yaab leh, Microsoft waxay ku dhiirigelinaysaa dhammaan isticmaalayaasha inay rakibaan noocyadii ugu dambeeyay ee nidaamyada hawlgalka ee aan soo sheegnay.
Apple ayaa sii deysay cusboonaysiinta cusub ee nuglaantan iyada oo la sii daayay macOS Monterey 12.1 iyo macOS Big Sur 11.6.2 December 13. Waqtigaas, Apple waxay si fudud u sharraxday in app uu awood u lahaa inuu dhaafo dookhyada gaarka ah. Sababtan awgeed iyo sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada, updates ayaa la sii daayay si loo xalliyo dayacanka.
Hadda, Microsoft ayaa daabacday Iyadoo loo marayo qoraal faahfaahsan oo ku saabsan blogga oo ku saabsan dhibaatada saxda ah iyo xalka la bixiyay. Waxaa qoray kooxda cilmi-baarista difaaca ee Microsoft 365, barta blogku waxay sharraxaysaa waxa TCC yahay. Tignoolajiyada ka hortagta Codsiyada waxay galaan macluumaadka gaarka ah ee isticmaalayaasha ogolaanshaha la'aantooda iyo aqoon hore.
Marka la eego tan, haddii qof xaasidnimo ah uu helo disk buuxa oo uu galo xogta TCC, way tafatiran karaan si ay u siiyaan oggolaansho aan sabab lahayn codsi kasta oo ay doortaan. Oo ay ku jirto codsigeeda xaasidnimo. Sidoo kale isticmaalaha ay saamaysay lama waydiin doono inuu ogolaado ama diido ogolaanshahan. Taasi waxay ogolaan doontaa lCodsigu wuxuu wataa goobo laga yaabo inaadan aqoon ama oggolaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » Waxaa lagu talinayaa in lagu rakibo cusbooneysiintii ugu dambeysay ee macOS Big Sur iyo Monterey
Ikea waxay ku darsataa AirPlay 2 ku hadasha buugaagta Symfonisk